musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Wizz Air CEO £ 100 Miriyoni Bhonasi Riles Unions
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Wizz Air's CEO József Váradi
Kupa mubayiro CEO pahwaro hwekuwedzera kwekambani, zvisinei nebhenefiti, tsoka yezvakatipoteredza, mamiriro emamiriro ekushanda, kuremekedza kodzero dzekanzuru uye dzevashandi uye hupenyu hwevashandi kusaremekedza zvachose kwete kune vashandi chete asiwo kumhuri dzavo uye nzanga yakawanda.
Wizz Air yanga ichiita mari pamutengo wevashandi vekutakura kwenguva yakareba.
Vashandi veWizz Air vanotarisana nemamiriro ekushanda akaomarara, muripo murombo, uye kusarongeka, dzimwe nguva kunyange zvisiri pamutemo, maitiro kubva kudivi revatungamiriri.
Kubhadhara József Váradi nebhonasi ye £ 100,000,000 yekumhanya nendege nenzira iyi haina kukodzera uye haigamuchirwe.
European Transport Workers 'Federation inoshora danho rekubhadhara bhiriyoni zana mamirioni emabhonasi kuna CEO weWizz Air József Váradi semubairo wekukurumidza kukura kweanotakura.
Wizz Air ikambani ine nhoroondo ine mukurumbira weanopokana-nehunhu maitiro - kudzingwa zvisiri pamutemo, kusaremekedza kodzero yekuronga, kubatanidza hurumende, uye kurasa magariro, kungodoma mashoma. Haisi chakavanzika chekuti vashandi veWizz Air vanosangana nemamiriro ekushanda akaomarara, muripo wakashata, uye zvisina tsarukano, dzimwe nguva kunyange zvisiri pamutemo, maitiro kubva kudivi revatungamiriri
Wizz Air anga achigadzira mari nekubhadharisa vashandi vekufambisa kwenguva yakareba. Mubayiro József Váradi nebhonasi ye £ 100,000,000 yekumhanyisa nendege nenzira iyi haina kukodzera uye haigamuchirwe, zvakatonyanya pakati pehosha yakasiya vazhinji vevashandi vekuvhiya vachisangana nekusachengeteka kwemabasa, hutano uye njodzi dzekuchengetedza kusanganisira njodzi dzehutano hwepfungwa, kuwanda kwebasa, kushushikana, uye kuneta.
Iyo ETF inodaidzira kune vagovana mari kuti vasiye bhonasi iyi, uye vagadzirise chero mabhonasi emunguva yemberi evatungamiriri venhandare pakuvaka kambani inogara nenjere nemamiriro ekushanda akanaka, mubairo wakanaka, nhaurirano yemagariro, uye hukama hwevashandi kwete pane kungokura uye purofiti zvichibva pakushandiswa kwevashandi.